Semalt Expert - Nzira Dzokunyengera Dzacho Inoshandiswa Sei?
Mbavha vanozviona zviri nyore kutora kutonga kwevhisi vheti vanhu vari paIndanetikuburikidza neInternet. Pane imwe nguva inowanikwa, inoshongedza zviri mukati maro pasina muridzi achiziva kuti yaenda. Mamiriro acho akaipa kune avoavo vasingazivi kuti pavanenge vava kuda kupedzisira vapihwa - roxy palace promotions. Pakazosvika gore ra2000, dambudziko rakanga rakapararira zvokuti United States yakanga inekuti vauye neInternational Crime Complaint Center (IC3). IC3 inoshanda senzvimbo yekuchenesa iyo inogamuchira uye inobvisa zvese zvinopomerwa zvenhema uyenhoroondo dzakabatana ne internet.
Mutengi Wekutengesa Mubudirira we Semalt Digital Services, Max Bell, inopa mazano anokosha pamusoro pekubiridzira kwekambani uye nzira yekudzivisa nayo.
Indaneti seSevha 'Playground
Sezvo webhutori inoshanda semugove weruzivo, inoshanda seyakanaka kwazvokubva ipapo vashandi vanotora varwere vavo. Kunyengera kunoreva chokwadi chisina kutaurwa kana kuvanza zvinhu zvinokosha zvinotungamirira kune vakaurayiwakutora chiito icho, pamagumo, chichavabhadhara.
Kuzivikanwa Kwokuba Nokunyengera
Kunyange vanhu vakangwarira vanobatwa nehupombwe. Skimming ndiyo nzira iyoanoshandisa zvigadzirwa zvemagetsi kuisa zvisiri pamutemo kuchengetedza ruzivo rwekadhi rechikwereti kubva kuvashandisi mushure mekutenga zvigadzirwa. Kunyanya kufungidzira ndomumwe munhuinodana kadhi yemuori achizviti ave mumiririri wekambani uye anokumbira dunhu rake pachako mukunyengedza kwekuvandudza data. Kamwe mbavha dzinoba iyachimiro, vanogona kushandisa ruzivo rwekuita unyengeri kuburikidza nekuita maDaini asina kufanira kune zita.
Vashandi vanogona kuzvidzivirira kuburikidza nekukanda mabhii ose nemarikiti yavasingadi.Wedzera zvidziviriro kumakisi ega ega. Kana mumwe achitya kadhi rechikwata chekwereti, vanofanira kusarudza kubhadhara achishandisa mari panzvimbo. UsambofaMashoko ehupenyu hwako pasinei nemamiriro ezvinhu.
Health Insurance Inonyanya Kubiridzira
Makadhi endishuwarensi yakarasika kana kubiwa inogona kuonekwa mumatambudziko enhema. Vanyengeri vanopfuurirakuva akaenzana sezvakaitika muna 2004, uko kwaiva ne $ 30 mamiriyoni muzvikwereti zvisingabhadharwe inshuwarheni. Inishuwarenzi unozivikanwa hutsotsi hunogonazvichibva kuhuteremarketing, spam emails, kana kuvhiringidzika vashandi. Iyo yekupedzisira inogona kugadzira nzira yezvinhu zvinotsausa pane zvinyorwa zvevarwere..
Vanhu vanofanira kuchengetedza zvinyorwa zvezvechiremba, ruzivo rwehuturo, nezvimwemapepa ari kure nembavha. Yese inshumo yenhamba yemainiti isiri kushandiswa inoda kupfekedzwa. Varwere vanofanira kurega kusaina chigunwe chehutanoinshuwarisi inogamuchirwa. Vanofanira kuziva kuti vangabhadhara zvakadini kubva muhomwe dzavo zvisati zvaitika.
Zviziviso Kuderedza Kuchinja
Nhamba dzekunyengera dzepaIndaneti dzinozivisa vanhu pazvinhu zvinoshungurudza zvinovabata,achivabvumira kuti vaite mauri nokukurumidza. Mushandisi anowana kunze kwebasa rairovha mbavha dziri kuedza kuwana. Nhoroondo yebhuku, bhangi kanasangano rinogadzirisa matanho pamusoro pekuti uye sei iyo inozivikanwa inoshanda uye inosvibisa muridzi. Parameters inoita kuti zvive nyoremasangano kutevera basa. Chero kutengeserana kunze kwemasimiti aya kunotanga chiziviso. Inopa mushandisi kupindura kanavanobvuma kana kuti vasingatenderi basa rakadaro. Makambani ekadhi rechikwereti anobatsirawo kudzivirira kuparadzirwa kwekuziva kuburikidza nekugadzirisa ushumirimaziso. Makambani aya anokanganisa chero basa risina kukodzera purogiramu yemuridzi. Zvisinei, chiito chinotorwa chinoenderana nemutengikushanda pakuita zvikwangwani nemashoko pamusoro pekusava nechokwadi.
Kana ukangwarira hwekutsvaga huripo hunoonekwa, tanga nekumupindura pakarepokuderedza basa remugadziri mubhuku racho. Zvadaro, tanga kuchenjerera kwekunyengedzera pamushumo wekwereti inounza zvakare chizivo chitsva chero nguvakune mutsara wekukumbira chikwereti. Kumbira kopi kubva kumakadhi ekadhi kuti uongorore uye ona chero basa risingaoneki. Dzimwe makambanikupa sarudzo yekukanda chikwereti pamushumo wechikwereti. Inorambidza uyo anokwanisa kuwana mharidzo.
Kuzivisa Kunyanya Kubiridzira
Munhu anokurumidza kupindira kumabasa ekunyengera ndiye anokurumidza kutorakushandiswa kwedata ravo. Mishumo yekutsauka kwekuzivikanwa kwekuzivikanwa kune chikwereti chikwereti ishanho rekutanga. Pamusoro pekuzivisa, vanodzivirira cheronhoroondo itsva yeruzivo pasi pezita raiye. Danho rinotevera nderokucherechedza hurumende.
Chikamu chakakosha ndechekubatana nekambani yemakadhi echikwereti. Mumwe anogonaunofanirwa kuchinja nhoroondo, logins, uye passwords. Uyezve, kuonana nekambani yefoni kunogona kushanda kumudzidzi kunobatsira sezvavanokwanisa kubatsira kuzivisauyo anoshandisa chero shanduko. Vachabatsira nekutarisa kwemashoko nemishumo.